မယ်လိုဒီမောင်၏ ငြိမ်းချမ်းသံစဉ်: ထာဝရ သူငယ်ချင်း နေဘုန်းလတ်
အိပ်မက်တွေကနေ လန့်လန့်နိုးခံစားချက်တွေ ထပ်ထပ်တိုးလာတဲ့ရင်ကွဲ ပက်လက် နံနက်တွေ။အနှစ်နှစ်ဆယ်လုံးလုံး အဲလိုမနက်မျိုးတွေမကြုံစေချင်ဘူးဒါပေသိ ဒီနတ်ဆိုးတွေရဲ့ မုန်တိုင်းတွေနဲ့ အလဲထိုးရိုက်ချက်တွေကြားထဲကလူကိုသာ အကျဉ်းချလို့ ရမယ်၊ စိတ်ဓါတ်နဲ့ အနုပညာကို ဘယ်တော့မှ ချုပ်နှောင်လို့ မရဘူး . . . ။နေဘုန်းလတ်သူငယ်ချင်းအဲဒီစိတ်ဓာတ်ကို လေးစားတယ်ဘယ်တော့မှ ဦးမညွတ်နဲ့အမြန် ပြန်ဆုံမယ် F - Forever R - Relations I - In E - Earth N - NeverD - DieYou are always be with us, my dear.
မင်းပြောင်းမင်းလွှဲမှာ ပြန်လွတ်လာမှာပါ ... ။အင်းလေ... ဒါကလည်း သိပ်မလိုတော့ပါဘူး ... ။ကံတရားကို ယုံကြည်ပါ နေဘုန်းလတ် ... ။ဗီလိန်တွေက ဇာတ်သိမ်းခါနီး ရှုံးသွားမှာပါ ... ။ကျွန်တော် သူငယ်ချင်းတွေများ ညံ့လိုက်တာ ... BE (EC)သာ ရထားတယ် ... အဲဒီ အီလက်ထရောနစ်ပုဒ်မကို မကြားဖူးဘူးတဲ့..။
ဟန်လင်းထွန်း said... ပြန်ဆုံမယ့်ရက်တွေ အမြန်ဆုံးနီးလာပါစေ..ဟုတ်ပါရဲ့...အီလက်ထရောနစ်ပုဒ်မ ဆိုတာ ခုမှပဲကြားဖူးတော့တာ....
မှတ်ထား electronic ပုဒ်မဆိုတာ...0 နဲ့ 1 ပဲပါတယ်0 လဲ on တယ်1 လဲ on တယ်